Bank Moon ?Afrika weli waxaa ka jira dembiyada la abaabulo, Burcad-badeeda iyo Argagixisada? – Radio Daljir
Bank Moon ?Afrika weli waxaa ka jira dembiyada la abaabulo, Burcad-badeeda iyo Argagixisada?
Diseembar 8, 2013 2:30 b 0
New York, December 8, 2013 – Xogahayaha guud ee qaramada midoobey Bank Moon ayaa beesha caalamka ugu baaqay in dalalka Afrika ee dhibaatooyinka iyo caqabaduhu la soo dersaan ay u baahan yahay in wax loo qabto isla markaasna la taageero, weliba dhinaca amaanka.
Mr. Bank ayaa carabta ku dhuftay jamhuuriyada Afrikada dhexe.
“Inta badan Afrika dhaqaalaha wuu kobcay, dimuqraadiyadu waa la horumariyay, arimaha bulshada, xasiloonida iyo kala dambeynta ayaa soo laabtay, Africa waxay ku soo laabatay baal cusub oo taariiqda ah”ayuu yiri Bank.
Xoghayaha guud ee qaramada midoobey wuxuu sheegay in horumarka Afrika wax badan laga gaaray, balse ay jiraan caqabado badan oo la soo dersay dalalka qaar, iyo dhibaatooyin aan xal buuxa laga gaarin oo weli qaarada ka jira.
Bank Moon ayaa carabta ku dhuftay caqabadaha weli ka jira Afrika ?Dambiyada la soo abaabulo, burcad badeeda, isku gudbinta waxyaabaha maanka dooriya iyo argagixisada ayaa weli ka jira Afrika oo u baahan in wax laga qabto.?
Bank ayaa sheegay in arrimahaas ay sabab u yihiin sharciyada Afrika ka jira oo aad u awood liita, hadiise ay awood wayn yeelan lahaayeen arrimahas oo dhan laga gudbi lahaa.
Xoghayaha guud ee qaramada midoobey ayaa hadalkaas ka sheegay kulan ka dhacay Paris, halkaas oo uu ka dhacay shir looga hadlayey arrimaha Afrika oo ay soo qaban-qaabisay dowladda Francsiiska, shirka ayaa lagu soo bandhigay wax badan oo u baahan wax ka qabasho.
Mudane Sulaymaan ?waxan rajo ka qabnaa in dhaqso dalka loo soo gaarsiiyo dhaqaalihii New deal-ka?
Munaasabada xuska qowmiyadaha Itoobiya oo ka bilaabanaysa maanta magaalada Jig-jiga ee DDSI